मन नभरे पछि – NEPÆNGLISH
मन नभरे पछि
आज कति दिनपछि तापक्रम २५ डिग्री सेल्सियसमा पुगेछ । स्कूलबाट भर्खरै फर्कन लाग्दा बाहिर न्यानो घाम लागेकोले एक छिन म पनि घाम तापेर बसौं जस्तो लाग्यो, तर अरू नै केहि गर्न बाँकी रहेका काम सम्झी घर फर्केँ । गाडीको क्यासेट प्लेयर खोलेँ र पृष्ठभूमीमा सुरिलो मधुर आवाजमा गीत गुन्जियो, “म मरे पनि मलाई, मेरो देशको मायाँ छ, यो छातीभरि मुरिका मुरि नेपालको मायाँ छ ।” गाडीको रफ्तारसँगै गीत सुन्दै गीतको शब्दहरूको मज्जा लीइराखेँ । अर्को अन्तरामा जब, “म खेलेँ जहाँ, म हुर्केँ जहाँ, त्यहि आँगन प्यारो छ” भन्यो, साँच्चिकै आफ्नो घरको आँगन सम्झेँ । रमाइलो होस् भनेर गीत सुनेको झन न्यास्रो लाग्यो । तै पनि गीत सुन्दै गाडी प्रति घण्टा १२० किलोमिटरको गतिमा हुइँकाउँदै थिए म । अनि अर्को अन्तरामा “जहाँ म जाऊँ, नेपाली हूँ म, नेपालको मायाँ छ” भन्दा, ए हो त भनेर मन-मनै सोचेँ । फेरि अर्को गीतको पालो आयो । त्यो पनि त्यस्तै खाले परे १९७४ एडीको – “जसो गर जे भन, जतासुकै लै जाउ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो ।” एउटा हातले स्टिएरिङ, अर्को हातले एउटा बटन दाबेर छिटो-छिटो गीत सकाएँ । अब भने मदन कृष्ण श्रेष्ठको “सय थरी बाजा एउटै ताल, सय थरी गोडा एउटै चाल” भन्दा मन अलि प्रफ्फूलित भएर आयो । घरमा पनि पुगिसकेछु त्यतिन्जेसम्ममा ।
घरमा पुगेर के खाजा खाउँ भन्दै सोचेँ । श्रीमान-श्रीमती दुबैको कार्यव्यस्तताले अरू केहि पनि खाजा तयार पारिएको थिएन । सोचेँ, आज साण्डविच [Sandwich] खान्छु । पूरा मन लगाएर बनाइ खाएँ, तर पेट भरे पनि मन भने भरेन । घरमा हुँदा परिवारमा कसरी नेवारी परिकार खान्थेँ, सो को पनि याद आयो । झन यो बेलामा गुन्ड्रुकसँग चिउरा खानु कस्तो मज्जा आउने । मेरो गुन्ड्रुकसँग एक किसिमको प्रगाढ मोह छ । कहिलेकाहिँ चिउरा र मूलाको पात, काँचो प्याज्,मकैसँगै चम्सुर खाने भनेपछि म सबै कुरा त्यागेर खान तयार हुन्थेँ । तर यहाँ त खोइ, त्यो मौका कहिले पनि जुरेन । सबै कुरा काँचो नै खान मनपर्ने । तर परदेशमा पसेदेखि भने त्यस्तो खाने तर्खर गर्दा पनि त्यहि आक्कल-झुक्कल मात्र साइत जुरेको छ । शायद, त्यहि भएर पनि हो कि, यो उमेरमै मलाई ‘डैवर्टिक्युलाइटिस्’ (Diverticulitis) भएछ ।
खानामा फाइबर तत्वको कमीले गर्दा मेरो ठूलो आन्ड्रामा संक्रमण भएको रहेछ । डक्टरले भनेको यो रोग विषेशगरि उमेरले ४०-६० कटेकोहरूमा देखापर्छ, तर म पनि यसको असरबाट अछुतो रहिनँ । स्मरणरहोस्, यो भनेको ठुलो आन्ड्रामा इन्फेक्सन भएको हो । मासु त्यति नखानेले हरियो सब्जिभन्दा मासुनै बेसी खाइयो । बिशेशगरि, मैले खानामा चिल्लो र मासुको मात्रा बधाएको हुनाले यस्तो भएको हो भनेर भन्छ । एउटा अचम्मको कुरा के भने नि, यसरी संक्रमण हुँदा यो उत्तरी गोलार्धमा बस्नेहरूलाई देब्रे पट्टी हुन्छ रे ! तर हामी दक्षिण गोलार्धमा वा पूर्विय ध्रुबबाट आएकाहरूमा भने दाहिने तर्फ हुन्छ रे ! यसले पनि यहाँका चिकित्सकहरूलाई मेरो उपचार गर्न सहि रोग पत्ता लगाउन अलि समयनै लगाइदियो । प्रारम्भिक जाँचमा आपेन्डिसैटिस (appendicitis) भनि ठानेछ । तर कहाँबाट हुनु ? बल्ल २ चोटि क्याट स्क्यान (CAT Scan) गरिसकेपछि बल्ल भन्छ, “महाशय, तपाईंलाई आन्ड्रामा संक्रमण भएछ ।”
बल्ल मेरो घैंटोमा घाम लागेछ । आफू खानाको पारखी । यहाँको बेस्वादको बोसे मासु, अनि त्यही रिब्स रे, डबल चीज बर्गर रे, बत्तर सटेड परिकार “आहा, क्या मिठो” भन्दै अघि-पछि नसोची पेट नै अटेश्-मटेश नहुन्जेल खाइयो । अब भने त्यसको करामत पनि बिस्तारै देखिँदैछ ।
गएको साता मेरो कलनस्कोपी भयो । एक पटक सिएनएनमा संसारकै पहिलो पटक कलनस्कोपीको प्रत्यक्ष प्रशारण भएको थियो । मैले पनि सोचेँ, म पनि मेरो कलनस्कोपी लाईभ वा प्रत्यक्षरूपमा पर्दामा हेर्छु । चिकित्सकले अनुमती दियो र मलाई बेहोस् पारिएन । आफ्नो पेटभित्रको प्रत्यक्षरूपमा पर्दामा हेरिरहँदा मनमा अनौठो लागेर आयो । झन चिकित्सकले आन्ड्रामा इन्फेक्सन भएको भाग झिक्दा एकछिन त कस्तो कस्तो लाग्यो । तर जे होस्, रमाइलो र अनौठो दुबै किसीमको अनुभव भयो ।
अँ, म खानेकुराको बारेमा भन्दै थिएँ । भोकले गर्दा यसो फेरी फ्रीज खोलेँ । भित्र बर्गर, साण्डविच सँगसँगै फलफूल र केही हरियो सब्जी अनि सलाड थियो । फुड पान्ट्रिमा हेरेको, त्यहाँ पनि श्रीमतीले भुटेर राखेको चिउरा र लसुन र प्याजको पोका पाएँ । अरू क्यान फुड खाने कुनै रहर भएन । अनि त के नै चाहियो र मलाई त्यहि पारामा खान – चिउरा, मूला, रायोको पात, अनि मुखै गन्हाउने काँचो प्याज । यी सबै थोक पाएपछि त मेरो दिन आजको लागि त फिर्यो भन्नु नै पर्यो । अनि गीतले भने झैं, म जहाँ गए पनि जता गए पनि, यो मन मात्र होइन, अझ पनि सबै नेपाली नै हो भन्ने पक्का लाग्यो । यसरी आफ्नोपन हुनु त छँदै छ, त्यसमाथि पनि एउटा सामान्य तर अहिले स्वास्थ्य परिकार मेरो शरीरले पाउनु, त्यो नै ठुलो कुरा भएको छ ।
Satya Maharjan March 31, 2010 A Day in the Life of Satya
Previous Previous post: Will to Live in Wilderness